Miverina ny Filoha Ravalomanana ary mirotsaka hofidiana indray ! – MyDago.com aime Madagascar
Nitafa tamin’ny mpampahalala vaovao ny fikambanan’ny « base » ny antoko Tiako i Madagasikara, dia ny 06 DISTIM sy ny 192 FOKOTIM izany , tetsy amin’ny foibeny Ampandrana androany.
Nivoitra tamin’izany fa mamporisika ny mpitarika ny antoko politika hanohy hatrany ny fifampidinihina hikatsaham-bahaolana amin’ny firenena ny Tim.
Notsindrian’izy ireo mafy koa fa » ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana eto an-tanindrazana ao anatin’ny Tetezamita ary hahafahany mirotsaka amin’ny fifidianana filoham-pirenena indray » no hampilamina ny tany sy fanjakana hoy izy ireo.
Mikasika ny fanatanterahana izany fifidianana izany dia tokony ho ny manam-pahaizan’ny firenena mikambana no mametraka ny datim-pifidianana.
Farany, mikasika ny « lundi Noir sy ny 7 febroary 2009 » dia takian’izy ireo ny hanaovana « enquete internationale » mba ahafantarana ny tena marina sy izay tompon’andraikitra tamin’ireny famonoan olona sy fandrobana ireny .
Tim 192 fokontany
Auteur Solo RazafyPublié le 4 février 2011 Catégories Malagasy, Négos, Politique, Vidéos
Précédent Article précédent : Aleo ny vahoaka no hitsara !
Suivant Article suivant : 2 Videos Ranaivoson Henry Roger 04/02/2011